I-Wuxi Lead Precision Machinery inikezela ngezinto ezahlukeneyo kwizinto zakho zesiko: i-aluminium, isinyithi, intsimbi engenasici, i-titanium, ubhedu, ubhedu, ubhedu, iplastiki kunye nezinto ezininzi.
Siyazingca ukwenza prototype kunye neenxalenye imveliso limited kunye neendibano ezahlukeneyo mveliso. I-Wuxi Lead Precision Machinery ivelise izinto zeenkampani kwezi mveliso zilandelayo
Ukuba uneenxalenye zeetitanium kufuneka zenziwe ngomatshini, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo.
Iinkonzo zethu zesinyithi kwiphepha zinikezela ngesisombululo esineendleko kunye nesifunekayo kwiimfuno zakho zokuvelisa. Sinesantya esiphezulu, imeko yesixhobo sobugcisa besinyithi esilungele ukuvelisa izixhobo zensimbi ezizinzileyo, ezisetyenziselwa ukuphela
Ukuba unamalungu eplastiki afuna ukuba kwenziwe ngomatshini okanye kubunjwe, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo, kwaye singenza umsebenzi wenziwe ngokuchanekileyo.
Ukuba uneenxalenye zobhedu kufuneka zenziwe ngomatshini, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo, kwaye sinokuwenza kakuhle umsebenzi.
Unyango lomphezulu bubuso bezinto ze-substrate ukwenza umaleko kunye ne-matrix yoomatshini, iipropathi zomzimba kunye neekhemikhali zomaleko womgangatho wenkqubo.